Kutengesa Iris kuti Ophthalmologists - 💡💻 Iris - Software Neziso kudzivirirwa, Health yauinayo 🛌👀
Iris floss nokuti Wayland
Kutenga Debit / Credit Card
Kutengesa Iris kuti Ophthalmologists
Version of nzvimbo Bulgarian
Agadzirira chinyorwa nezvipiriso vanachiremba
vatengi vanobatsirwa 10% dhisikaundi kubatana chiremba
vanachiremba kuwana 20% wokutengesa
Vachadana sei kusvika?
Отивам в Google и почвам да търся и звъня на всички ophthalmologists, optometrists, оптометристи и очни клиники muBulgaria kunze.
Ndinofanira kuenda kuburikidza mabharani uye ipapo kuenda kwachiremba.
Uvezhdavane kuti mushandi, chiremba vachange kuziva Iris
Telephone kukurukura nachiremba, waari
A kutengeserana pamusangano kusimudzira varwere vavo Iris
Track zvabuda uye kuti mari
Hello Zviri nyore,
Ndiri Daniel Georgiev, maneja wekambani Iris Technologies.
boka rangu semi kubatsira vanhu vane zvinetso zvoutano zvavo maziso angu uye Software ikozvino Iris ndiyo imwe yenzvimbo dzine mukurumbira utano zimbabwe in the world.
tine pamusoro 2 miriyoni vanozvishandisa uye vanhu vazhinji kunyange muBulgaria ndanzwa izvozvo uye kurishandisa.
In mutsetse uyu mafungiro ndinoda kuenda oftomatolozite mu kiriniki yako.
ndiri, ivo vachava nakisa zvikuru izvi, tinoita
uyewo Ndine pfungwa yavo pamusoro pamwe kuti awedzere.
Who kuonana, ndiani kuzodana, kutaurira zvakawanda.
Unogona Ndipei ruoko? 🙂
contact@iristech.co · Terms uye Conditions · gadzirwa na Daniel Georgiev.
Tinoshandisa Cookies kupa iwe uri nani Browsing ruzivo, personalize kugutsikana uye ongorora nzvimbo motokari. Verenga atichaita macookie ashande uye sei unogona kudzora kwavari nekudzvanya "Privacy Zvamada". Kana kuramba kushandisa nzvimbo iyi, iwe kubvuma kushandiswa yedu makeke.
Privacy sarudzo Center
Paunoshanya upi Website, zvinogona kuchengeta kana dzosa mashoko browser, kunyanya muchimiro makeke. ruzivo urwu angava pamusoro pako, zvaunofarira yako kana mudziyo wako uye kunyanya kushandiswa kugadzira nzvimbo basa sezvo unotarisira kuti. Mashoko haritauri Kazhinji zvakananga ufanane, asi zvinogona kukupa zvakawanda munhu zvichienderana padandemutande ruzivo.
Nekuti tinoremekedza kodzero dzenyu voga, unogona kurambidza mamwe marudzi makeke. Click on siyana muchikwata misoro kuwana zvakawanda uye kuchinja edu default Kurongwa. zvisinei, ichivharira dzimwe mhando makeke kungakanganisa ruzivo wako nzvimbo uye mabasa tinokwanisa kupa.
Cookies kuti zvinodiwa nzvimbo ishande zvakanaka.
nguva dzose Active
Izvi kukubatsira kuti mubayiro rusununguko kushandiswa chikumbiro uye akupe dhisikaundi kana mumwe munhu akakumbira kuna Iris Website.
PHPSESSID, koka, ap_id
Aya anoshandiswa chamber User nekuita wanikidza matambudziko zvinogona. Izvi zvinotibatsira kuvandudza mabasa edu nokupa Analytical mashoko pamusoro sei vanoshandisa vanoshandisa nzvimbo iyi.
NOT, mvumo, 1P_JAR, HERE
Kuvhara nyaya yako?
Nhoroondo yako kuvharwa uye mashoko ose zvichabviswa zvachose dzadzimwa uye haagoni akaporazve. Une chokwadi here?